Njem Buddha nke Uttar Pradesh
| 265 njegharị
DAY 01: BỤ NA VARANASI
Gaa na Varanasi Airport / ọdụ ụgbọ oloko ma na-agafe na họtel ahụ, nabata na Welcome Welcome. Ọhụụ na - aga njem na Varanasi - gaa na New Vishwanath Temple na ụlọ akwụkwọ nke Banaras Ụlọ Akwụkwọ Hindu, Ụlọ Sankat Mochan, Ụlọ Nzukọ Tulsi Manas, Ụlọ Nzukọ Durga, Ụlọ Nzukọ Tridev, Kaudi Mata Ụlọ Nsọ wdg. Na mgbede Ganga Aarti na Boating na River Ganga Dasaswamedh Ghat & ehihie na abalị na Varanasi.
N'ihu ụtụtụ na Gaya gaa na ụlọ Vishnupaad maka Ritual Pinda Dann pooja na Mangala Gauri Darshan. Gwa Bodhgaya ka ị gaa n'ụlọ nsọ Mahabodhi, osisi Bodhi, nnukwu Buddha Statue, ụlọ nsọ China, Barabar Cavas, Ajapala Nigrodha Tree na ebe ndị mọnk Royal Bhutan. Bufee ụgbọala laghachi Varanasi. N'abalị na-anọ na Varanasi.
Mgbe nri ụtụtụ gara Sarnath bụ ebe Onyenwe Buddha kwusara ozi ọma mbụ mgbe ihe ọmụma gasịrị, gaa Dhamek Stupa, Chaukhandi Stupa, Ụlọ Nzukọ Jain, Ụlọ Buddha, Sarnath Museum, Ashok Pillar, Deer Park. Mgbe ahụ kwaga ụgbọala na Ramnagar Fort, Obí eze nke Varanasi. Na nleta mgbede Silk Weaving center center nke Varanasi ngwaahịa ahụ laghachi na nkwari akụ. Mee ohuru wee gaa na Kal Bhairav ​​Temple. Laghachite na nkwari akụ na abalị na Varanasi.
Mgbe nri ụtụtụ na-agagharị Ayodhya, gaa na Saryu River, Hanuman Garhi, Ram Janam Bhumi, Kanak Bhawan, Ramkot, Swarg Dwar, Mani Parbat, Sugriv Parbat, Treta Ke Thakur, Ụlọ Nzukọ Nageswarnath. N'abalị na-anọ na Ayodhya.
Mgbe nri ụtụtụ na-agagharị Allahabad maka nleta Triveni Sangam maka ebe a na-ehicha ihe, Allahabad Fort, Hanuman Temple, Anand Bhawan, Museum Allahabad, Iskon Temple, Alopi Devi Temple, Nav Grah temple wdg. Mbanye ụgbọala Varanasi. N'abalị na-anọ n'ụlọ nkwari akụ na Varanasi.
DAY 06: AHỤTA NKE VARANASI
Mgbe nri ụtụtụ na-aga site na nkwari akụ gaa n'ọdụ ụgbọ elu / okporo ụzọ maka ụgbọ elu iji jikọọ Flight / Train gaa na-esote ebe na-echeta obi ụtọ.